रक्त क्यान्सर पीडित बालिका दिप्तीलाई दुई लाख सहयोग — donnews.com
पोखरा । रक्त क्यान्सर पीडित पोखरा–३१ बेगनासकी ३ बर्षिया बालिका ‘दिप्ती सापकोटा बचाउ अभियान’ले शुक्रबार उनका अभिभावकलाई २ लाख १ हजार ६० रुपैया हस्तान्तरण गरेको छ ।
संकलित रकम पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्र्तगतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अस्पतालका बालरोग विभाग प्रमुख बरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. रामचन्द्र बास्तोलले पीडित बालिकाकी आमा कोपिला सापकोटा रानाभाटलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
विभिन्न व्यक्तिबाट उठेको सहयोग रकम ‘दिप्ती बचाउन अभियान’का नेतृत्वकर्ता राम रानाभाट मार्फत डा.बास्तोलाले हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
उनले कान्ति बाल अस्पतालमा रहेर उपचारमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले थप केही दिन अभियान चलाएर जानकारी दिए । सहयोग आउने क्रम जारी रहेको उल्लेख गर्दै, रानाभाटले दिप्तीका बुवा देवबहादुर सापकोटाको गरिमा बिकास बैंकको खातामा समेत रकम जम्मा गर्न सकिने बताए ।
असार १ गते देखी क्षेत्रीय अस्पतालको बच्चा वार्डमा उपचार गराई रहेकी बालिकाको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको र उपचारमा सहयोग गर्न भन्दै डा.बास्तोलाले पनि सम्पर्कमा रहेका केही साथीहरुलाई म्यासेन्जर मार्फत् र केही अनलाईनले समाचार प्रकाशन गरेपछि अभियान शुरु भएको हो ।
अस्पतालका बालरोग विभाग प्रमुख बालरोग विशेषज्ञ डा.बास्तोलाले अहिले बच्चाको उपचार क्षेत्रीय अस्पतालमा भएपनि थप ढिलाई गरे बच्चाको ज्यान जानसक्ने बताए । उनले अहिले अस्पतालले निशुल्क उपचार र कुुरुवालाई समेत निःशुल्क खाने व्यवस्था मिलाएको बताउँदै तुरुन्त क्यान्सरको उपचार संभव हुने अस्पतालमा पठाइएको बताए ।
कान्ति बाल अस्पतालमा त्यहाँका चिकित्सकसँग सम्पर्क गरेर शुक्रबार नै पठाउने तयारी गरिएको समेत डा.बास्तोलाले बताए ।
क्यान्सरलाई थप फैलन नदिन ज्वरो कम गर्न, घाउ भएमा फैलन नदिने जस्ता उपाय र उपचार अस्पतालले गरेको बताउँदै डा.बास्तोलाले थप उपचार यहाँ संभव नभएको बताए । ज्वरो आएर इमर्जेन्सीमा आउनु भएको रहेछ, हामीले भर्ना गरी छुट्टै कोठामा राखेर उपचार र अक्सिजन समेत व्यवस्थ गरेका छौं, डा वास्तोलाले भने, औषधी पनि निःशुल्क छ ।
उनका अनुसार समयमै उपचार गरेमा निको हुने अवस्था ६० प्रतिशत भन्दा माथि रहेको बताए । उनले बच्चालाई ए.एल.एलए. क्यूट लिम्फोसाइटीक ल्यूकेमिया (ब्लड क्यान्सर भएको हो । डा. बास्तोलाका अनुसार बच्चालाई किमोथेरापीबाट उपचार अघि बढाउन लगाईनेछ ।
रकम हस्तान्तरण गर्दै, डा.बास्तोलाले संकलित रकम दुरुपयोग नगरी बच्चाको स्वास्थ्यमै खर्चन अभिभावकलाई सुझाव दिएका छन् । उनले उदारमन सहित रकम सहयोग संकलन गरेको भन्दै अभियन्ता रानाभाट सहितलाई धन्यवाद समेत दिए । उनले भने–‘वास्तवमा नेपालीहरु उदारमनका छन् यस्ता घटना हेर्न
सक्दैनन्, मिडिया र साथीभाईसँग कुरा गरेको यतिका रकम संकलन भयो ।’
पीडित बालिकाकी आमा कोपिला रानाभाट सापकोटाले सहयोगी मनहरुलाई धन्यवाद दिदै, यो सहयोगले आफ्नी छोरी बाँच्ने आशा पलाएको बताईन् । रकम हस्तान्तरण गर्न संचारकर्मी नवराज सापकोटा, सचिन रानाभाट, बेगनास युवाक्लवका सुरेन्द्र पुन र चित्रबहादुर गुरुङ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अस्पताल पुगेका थिए ।